Ifulethi likagogo elizimele elivulekile ekhaya lethu lobuciko - I-Airbnb
Ifulethi likagogo elizimele elivulekile ekhaya lethu lobuciko
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Paula
Ifulethi likagogo elihlukile elivulekile elikhanyayo lilungele izithandani ezisebasha, abathanda izinto ezintsha kanye nabasunguli. Yangasese futhi ivulekile kunekamelo endlini. Okomuntu siqu kakhulu futhi okuxakayo kunefulethi elinesevisi. Umsebenzi wobuciko waseNtshonalanga Australian ezindongeni, izimbali zasendle zase-Australia engadini kanye nempahla yasekhaya yomklami wase-Australia yenza leli kube iholide elihle lase-Aussie ekhaya lethu lokudala. Eduze kwezindawo zokudlela ze-Angove St, imizila yamabhasi, i-ECU kanye ne-CBD. Ukufinyelela echibini nasengadini.
SICELA UFUNDE YONKE IMINININGWANE OKULANDELAYO NGAPHAMBI KOKUBHKHA
Ikhaya lethu lihlanganisa umndeni ohlakaniphile onenja, isitudiyo sokuklama, ifulethi likagogo nezingadi. Ifulethi likagogo elingu-3 liphansi, linomnyango ohlukile egcekeni lethu kanye nokufinyelela endaweni yokupaka ngaphandle komgwaqo.
Indawo yokuphumula/yokudlela evulekile ifakwe iTV, iDVD neWiFi. Kukhona itafula lokudlela elinombono omuhle phezu kwengadi, kanye nombhede/umbhede wosuku.
Ikhishi lincane kakhulu kodwa linombono omuhle ngengadi nakho konke okudingayo ekuphekeni kwamaholide - Izinsiza zokupheka eziyisisekelo kodwa ezisebenza kahle kakhulu, i-microwave, i-toaster, igedlela, i-wok kagesi, ipuleti elishisayo namabhodwe, ifriji elincane kanye ne-tableware yekhwalithi. Kukhona futhi nohhavini we-pizza omncane, lapho ngezisekelo ezithengwe ebhikawozi yasendaweni yaseTurkey, uzokwenza ukuthi ukhiphe ama-pizza angcono kakhulu! Uma ulidinga ngempela ikhekhe elisanda kubhakwa vele uhambe ulithenge e-patisserie ewubukhazikhazi emgqeni wekhefi ezansi nomgwaqo.
Ishawa kanye nendlu yangasese ehlukene. Iyasebenza kodwa ayinhle.
Izindawo zokudlela zasendlini nangaphandle. Wamukelekile ukukhetha imifino esiqeshini se-veggie uma isesizini. Kukhona ichibi elinechibi lokubhukuda elimnandi kunawo wonke! Nezinyoni eziningi engadini yethu egcwele izitshalo nezihlahla zezithelo zase-Australia.
Sithi indawo ilungele imibhangqwana emisha, abathandi bokuzijabulisa kanye nabadali, ngoba lezi yizivakashi "eziyitholayo". Bathanda umtapo wezincwadi omncane wezincwadi zase-Australia, imisebenzi yobuciko emikhulu eyenziwe ngamaciko aseNtshonalanga Australia nezinye izinto zasekhaya zase-Australia. Bathanda ukuzizwisa okuhlukile kwe-Airbnb ngoba ayifani nefulethi elinesevisi ejwayelekile. Yebo, ikhishi liyi-quirky, kodwa ingadi yomdabu kanye nesiqephu se-veggie siyingqayizivele. Ishawa iyisisekelo, kodwa ichibi lihle kakhulu. Intsha nenja zingabanga umsindo ngezikhathi ezithile kodwa uma izivakashi zikulangazelela sizokuyisa emicimbini emihle yasendaweni futhi namadrayivu ethu ezikhathi ezithile ebusuku ayashisa bhe! Asikho isikhala sika-Karen lapha!
Bheka zonke izithombe nezincazelo ukuze uthole imininingwane yesakhiwo nezinsiza - izithombe ezithathwe umthwebuli we-AirBnb.
Yindawo ejabulisayo, enethezekile nehlanzekile.
INorth Perth iyindawo engaphakathi yedolobha ephilayo. Indlu ihlezi emgwaqeni othule onamaqabunga futhi indawo iphephile futhi inobungane. Indawo yethu ingaphandle kwendawo yekhefi ye-Angove Street, ngakho-ke kunezinketho eziningi zamakhofi nokudla ngaphandle. I-Rosemount Hotel inohlu oluhle lomculo obukhoma nokuzijabulisa. Kukhona nesikhungo sokuthenga sendawo esineposi, i-newssagent njll kuFitzgerald Street eseduze. KuCharles Street kunesitolo semifino ephilayo, isitudiyo se-pilates futhi kukhona namapaki eduze. Siseduze neNorthbridge, Edith Cowan University, WAAPA, Perth Cultural Centre kanye neCBD.
Singabavakashi abashisekayo futhi siyakujabulela ukuhlangana nabanye esihamba nabo kodwa futhi sihlonipha ubumfihlo bakho. Uhlala ujabulile ukwabelana ngolwazi lwendawo, izindawo eziyimfihlo namathiphu okuhamba mayelana ne-Perth ne-Western Australia. Woza ungqongqoze emnyango ongemuva ukuze nixoxe noma niphuze inkomishi yetiye (noma i-gin & tonic). Sizokuyisa ngisho nasezindaweni zasendaweni uma uzimisele.
Singabavakashi abashisekayo futhi siyakujabulela ukuhlangana nabanye esihamba nabo kodwa futhi sihlonipha ubumfihlo bakho. Uhlala ujabulile ukwabelana ngolwazi lwendawo, izindawo e…